Shamdadda Suuqyada Yurub oo Hoos u Dhacay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shamdadda Suuqyada Yurub oo Hoos u Dhacay
La daabacay tisdag 1 november 2011 kl 16.36
Shamdadda dhaqaalaha suuqyada Yurub ayaa aad hoos ugu dhacay kadib go'aankii maamulka dalka Giriiggu ku sheegey in bulshada dalkaasi cod loogu qaadi doono. Shamdadda Istockholm ayaa hoos u dhacday ugu yaraan 5%.
Halka sidoo kale ey aad hoos ugu dhaceen qiimaha saamiga bangiyada Yurub. Afarta bangi ee dalka ugu waaweyn ayaa sidoo kale hoos u-dhac ku yimid, iyadoona uu ugu liito bangiga SEB oo uu saamiga waraaqihiisu hoos u dhaceen 8,6%.
Carl Bildt, wasiirka arrimmaha dibadda ee Iswiidhen oo ku sugan magaalada London si uu uga qeyb-galo kulan caalamiya ee la xiriira aaladda Internetka ayaa sheegay in farriinta ka soo yeedhay dalka Giriiggu ahayd mid kedis ku noqotay, sida ay qortay hayadda laanta wararka ee TT.
- Waa mid sidaa la oran karo. Way igu adag tahay inaan fahmo sidii su'aasha loo dhigi lahaa. Waxaana loo baahan yahay in wax badan la qeexo. Su'aashu ma waxay ku saabsan tahay inuu dalkaasi doonayo in la badbaadiyo iyo in kale?, sida uu sheegey Carl Bildt.